﻿﻿ Global POS (Point of Sale Software)
close× Call Us 01-8560067, 01-8560068, 01-8560040
နေ့စဉ်အရောင်းစာရင်းများ၊ ကုန်ပစ္စည်း လက်ကျန်စာရင်းများ၊
အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး Web/ Mobile ပေါ်မှတဆင့်
ဖုန်း၊ကွန်ပြူတာ နှင့် Electronic အရောင်းဆိုင်များ၊
စားသောက်ဆိုင် နှင့် Cafe Drink များ၊
အထည်ဆိုင် နှင့် Fashion ဆိုင်များ၊
အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများ နှင့် ကုမ္ပဏီများ
အစရှိသော လုပ်ငန်းများ၏ အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ ကို သာမန်ထက် လျင်မြန်တိကျစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကူညီပေးမည့်
Ponit of Sales Software...
with top support ..
သင့်လုပ်ငန်းတွင် GlobalPOS ကို ရင်နှီးမြှပ်နှံ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် စာရင်းဇယားများ ပိုမို တိကျ မှန်ကန်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ပိုမိုမြန်ဆန် လာပါလိမ့်မည်။
GlobalPOS အတွက် သင်ကုန်ကျထားသော ကုန်ကျစရိတ် ထက်ပိုမို တန်ဖိုးရှိသော အကျိုးအမြတ်များ ရရှိပါလိမ့်မည်။
ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး အရည်အသွေးမြင့်သော POS စက်ပစ္စည်းများ
Cash Receipt Printer
Installation , Training နှင့် အသုံးပြုပုံအညွှန်းများအပြင် ဝယ်ယူပြီး (၂) လတိတိအခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကိုပါ ပြုလုပ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ ၂ လကျော်လွန်သွားပါကလည်း သင့်တော်သော နှုန်းထားများဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အရောင်း Voucher ဒီဇိုင်းများကို မိမိစိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်ဖန်တီးနိုင်ခြင်း။
Barcode များကို မိမိကိုယ်တိုင် အလွယ်တကူ ဖန်တီးထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းများကို သက်ဆိုင်ရာ Unit (အစုအဖွဲ့) ပုံစံ မျိုးစုံ
POS ​နှင့်​ပတ်​သက်​သော Report ​များ​ကို Customize ​ဆောင်​ရွက်​နိုင်​ခြင်း။
Myanmar ၊ English နှစ်ဘာသာအသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
ဆိုင်ခွဲများ၏ အချက်အလက်များကို ရုံးချုပ်သို့ ပေးပို့ပေးနိုင်ခြင်း။
Global POS Software ကို အောက်ပါလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Original POS System
For any retail stores
Mini Mart များ
Pending POS System
Coffee ဆိုင် နှင့် Bakery ဆိုင်များ
Tea Shop နှင့် အအေးဆိုင်များ
Unique Attribute POS System
For Electronics stores
Simple Attribute POS System
We power hundreds of shops and they love Global POS
Testimonials from some of our customer
ကျွန်မဆေးခန်မှာ Global POS သုံးနေတာ ၁နှစ်ကျော်နေပါပြီ ။ အသုံးပြုရတာ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ် ။ အခက်အခဲရှိလာရင်လဲ စေတနာထားပြီး ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ် ။
Ma San Thida
Manager, Myint & Son Skin & Laser Center
Family Minimart မှာ Global POS သုံးနေပါတယ်။ နေ့စဉ် ၊ လစဉ် ၊ နှစ်စဉ် ၊ ရောင်းအား ၊ အရှုံး ၊ အမြတ် တွေကို Global POS မှာကြည့်လို့ရတော့ စာရင်းတိတိကျကျနဲ့ အလုပ်ကိုအောင်အောင်မြင်မြင် ရှေ့ဆက်လို့ရတာပေါ့ ။
Ma Yin Myat Thu
Owner, Family Minimart
ဟိန်းဆက်သင်္ဘောဆေးဆိုင်မှာ သင်္ဘောဆေးအမျိုးအမည်တွေ အရမ်းကိုများပြားပါတယ် ။ Stock အမျိုးအစားတွေ ဘယ်လောက်များများ ၊ ကုန်ပစ္စည်းအရောင်းအဝယ် ၊ လက်ကျန်ပစ္စည်းအားလုံးကို Global POS ကနေလွယ်လွယ်ကူကူ ကြည့်နိုင်တယ် ။ Service Maintenance များကိုလည်း ထိထိရောက်ရောက် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်လို့ အထူးနှစ်သက်မိပါတယ် ။
Ma Su Hlaing
Owner, Hein Sat
Unicity Marketing (Myanmar) Co., Ltd. မှာ Global POS Software ကိုအသုံးပြုနေပါတယ်။ Stock တစ်ခုခြင်းစီရဲ့ PV no. အလိုက်အသုံးပြုလို့ရတာကြောင့်အဆင်ပြေပါတယ်။အဝယ်ဘောင်ချာဖွင့်ခြင်းနဲ့ လက်ကျန် Stock များကြည့်နိုင်တာကြောင့် ကျွန်မတို့ ဆိုင်အတွက် အရမ်းကိုကောင်းမွန်တဲ့ Software တစ်ခုပါ။
Ma Hnin Yu Hlaing
Cashier, Unicity Marketing (Myanmar) Co., Ltd.
Global POS software ကို 2013 ခုနှစ်မှ စတင်သုံးစွဲခဲ့ပါတယ် ။ Baby Fashion ဆိုင်ဖြစ်ပြီး အရောင်းပိုင်းကို လျှင်မြန်စွာရောင်းချနိုင်ခြင်းနဲ့ လက်ကျန်များ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းကြောင့် အဆင်ပြေပါတယ်။ အရောင်းစာရင်းများကိုလည်း တစ်နေ့တာ ၊ တစ်ပတ် ၊ တစ်လ စသည်ဖြင့် Date to Date ကြည့်နိုင်တာကြောင့် ဆိုင်ရဲ့ ရောင်းအားတွေကို Software ဖွင့်ကြည့်ရုံနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်။
Wint Thinzar Htut
Chief Accountant, OVO Baby & Kids Fashion(Junction Square)
ကျွန်မတို့ ဆိုင်မှာ Global POS Software အသုံးပြုပြီး အရောင်းလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့လို ဖုန်းဆိုင်တွေမှာဆိုရင် ဖုန်းတစ်လုံးချင်းစီရဲ့ IMEI နံပါတ်တွေလည်း ထည့်သုံးလို့ရတော့ Customer တွေ ဖုန်းတစ်ခုခု ဖြစ်လို့ ပြန်လာလဲရင် Software မှာကြည့်လိုက်တာနဲ့ သိနိုင်တယ်။ ကျွန်မတို့လို ဖုန်းဆိုင်တွေ အတွက် အဆင်ပြေတဲ့ Software ပါ။
Daw Ohn Myint
Owner, Moshi Mobile & Accessories
Global POS System ကို အသုံးပြုရတာ လွယ်ကူစေရန် လိုအပ်တဲ့ Training နဲ့ Service ကို လဲ လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ လာရောက် ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ် ။ Global POS Software က အရောင်းပိုင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာမှာလည်း အထောက်အကူဖြစ်လို့ ကျွန်မတကယ် သဘောကျပါတယ် ။
Ma Pike Pike Htwe
Manager, Myanmar Tha Gyee
Myanmar Awba တွင် 23.7.2013 မှစတင်၍ Global POS software ကိုသုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ Global POS အရောင်းပိုင်းတွင် ပုံမှန် လက်ငင်းအရောင်းစနစ်အပြင် အကြွေးရောင်းစနစ်၊ consignment စနစ် တို့ဖြင့်ရောင်းချနိုင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရတာ ပိုမိုအဆင်ပြေစေပါတယ်။ ရရန်ရှိအကြွေးတွေကိုလည်း သီးခြားမှတ်သားထားစရာမလိုအပ်တော့ပါ။ Report တွေကလည်း ကျွန်တော်တို့အတွက် အလွန်အသုံးဝင်တာကြောင့် Myanmar Awba ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ရှိ branch များတွင် အသုံးပြုနေပါပြီ။
Ko Soe Moe Naing
Manager, Myanmar Awba
Yangon Supper Club စားသောက်ဆိုင်မှာ Customer များမှာယူထားသော စားပွဲအလိုက်စာရင်းများ ၊Pending Voucher စနစ် ၊ Tax စနစ်ဖြင့် ရောင်းချရာတွင် Global POS Software ရဲ့ အကူအညီတွေကြောင့် အဆင်ပြေပြေနဲ့ ရောင်းရပါတယ်။
Ko Min Htike
Manager, Yangon Supper Club
Copyright © Global Wave Technology, 2015
Call Us: 01-8560067,01-8560068,01-8560040
Room(303), 3rd Floor, AKK Shooping Mall, Thingangyun Tsp, Yangon, MM.